TTSweet: 2nd prototype of အုန်းနို့ကျောက်ကျော ...
Posted by T T Sweet at 1:40 AM
ကျောက်ကျောက အချောင်းမို့လို့လားမသိဘူး အရောင်တအားကြည်တယ်ဗျနော်။ အုန်းစိမ်းနံ့လေးနဲ့မို့ ကောင်းမှာ သေချာတယ်။
:P November 10, 2012 at 2:25 AM
တီတီရေ.. အင်ဂျင်နီယာ ကျိုတဲ့ ကျောက်ကျောမို့လို့လား မသိဘူး
နှစ်ထပ်က ညီနေတာပဲ ၊ ပေတံနဲ့တိုင်းရင်တောင် အတိုင်းအတာ တူတူထွက်လောက်တယ်း)
မမိုး November 10, 2012 at 8:47 AM
အရင်က မသိတော့ ကျောက်ကျောသပ်သပ်၊ အုန်းနို့သပ်သပ် ကျိုပြီးစားဘူးတယ်.
၀ိတ်တွေတက်လွန်းလို့ အချိုတွေ သိပ်မစားတော့တာ။
ခုတခါတော့ လုပ်ကြည့်ချင်လို့ ၀ိတ်တက်ခံ စားလိုက်ဦးမယ်....
ဘွားလေး ပြောတာ မှတ်မိသလောက် ဆား ထည့်ရင် အချို ပို လေးတယ် ဆိုလား..
Natthamee November 10, 2012 at 3:51 PM
ကျောက်ကျောချောင်းနဲ့ မလုပ်ဘူးလို့ လုပ်ကြည့်မယ်။
ဒေါ်စိုး November 10, 2012 at 5:41 PM
အခုတော. စမ်းကြည်.လိုက်ဦးမယ်။ ပြီးတော.ကျောက်ကျောအချောင်းနဲ. မလုပ်ဖူးသေးဘူး။ အမှုန်.နဲ.ချည်းဘဲလုပ်နေတာ။
ဘုန်းကြီးအချိုပွဲကပ်ဖို. အခုထဲက တီဆွိလိုစမ်းကြည်.ထားမှဘဲဗျို.။
T T Sweet November 11, 2012 at 4:11 AM
Thamee Su Nov 10 (1 day ago)
Thamee Su has leftanew comment on your post "2nd prtotype of အုန်းနို့ကျောက်ကျော ...":
အုန်းနို့ကျောက်ကျောလေးလာစားပါတယ် တီတီဆွိ....စုရဲ့ဘလော့လေးကို လင့်ချိတ်ပေးထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း)
T T Sweet November 11, 2012 at 4:17 AM
မိုးငွေ့........ via blogger.bounces.google.com
4:57 PM (11 hours ago)
မိုးငွေ့........ has leftanew comment on your post "2nd prototype of အုန်းနို့ကျောက်ကျော ...":
မီးလဲ တယ်လီဖုန်းကျောက်ကျောမှုန့်ပဲသုံးဖူးတယ် ကျောက်ကျောချောင်းနဲ့လုပ်ကြည့်ဦးမယ်
Tuumar November 13, 2012 at 2:16 PM
လည်လည်လာပြီး အစားတွေ အများကြီးစားသွားပါတယ် ပျော်စရာကြီးရယ်နော် စာတွေလဲအများကြီးရေးတတ်တယ်နော် သဘောကျနှစ်ချိုက်စွာနဲ့နောက်နေ့လဲ လည်လည်လာအုံးမယ်နော်...